Global Voices teny Malagasy » Haiti: Sioka Avy Eny Ifotony · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Marsa 2018 3:01 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika Miranah
Sokajy: Karaiba, Haiti, Mediam-bahoaka, Voina, Vonjy Voina
Satria manakoako nanerana izao tontolo izao ny hatsiravin'ny horohorontany tany Haïti, mponina ao an-toerana maromaro, mpanao gazety avy any ivelany, ary mpiasa mpamonjy voina no nisioka avy eny ifotony. Misy ireo miasa mba hanangona fanampiana sy vola, ny hafa kosa miezaka mampiseho amin'izao tontolo izao ny zava-mitranga ao Haiti. Ny sasany indray mitatitra momba ny tranga tany amin'ireo toerana manokana, manantena hanamaivana ny ahiahin'ireo hava-tiana any ivelany (hatramin'izao, tsy dia misy fanazavana firy momba ireo naratra sy maty nivoaka an-tserasera).
Vao maraina, olona maro teny ifotony no nisioka momba ny korontana any Haïti tamin'izany fotoana izany. @fredodupoux nilaza  hoe:
fredodupoux monina ao Haiti
@bhatiap nanamarika ny tsy fisian'ny polisy:
bhatiap nanamarika ny tsy fisian'ny polisy
@PIH_org (Sakaiza amin'ny Fahasalamana) ao Boston mavitrika mitady dokotera , indrindra indrindra mpandidy momba ny taolana ho alefa any Haiti:
Fikambanana ao Boston mitady dokotera mpilatsaka an-tsitrapo
Mpisera Twitter sasany indray mitatitra momba ireo tranobe, lalana manokana, ary koa vaovao hafa ho an'ireo izay mitady fianakaviana na miezaka mandehandeha manerana ny firenena. Manamarika i @yatalley fa tsy azo idirana ny lalana avy ao Port-au-Prince renivohitra, hatrao an-tanànan'i Jacmel :
Yael Talleyrand mitatitra avy ao Jacmel, Haiti fa tapaka ny lalana ary tsy misy ny lalana andehanana na dia amin'ny moto aza
@RAMHaiti nanamarika ny faharavàna goavana eny amin'ny toeram-pivavahana. Mitatitra momba ny fiangonana iray ao Port au Prince, hoy izy :
Richard Morse misioka avy ao Port au Prince
@fredodupoux niditra tao amin'ny distrikan'i Delmas  ivelan'i Port au Prince, faritra anisan'ny tena rava. Hoy izy nisioka :
Frederic Dupoux nanamarika ny faharavàna goavana ao Delmas, Haiti
Satria mbola mitohy hatrany ireo sioka, misy ny fomba maro hanarahana ny vaovao. @georgiap nanangana ny lisitr'ireo mpisera Twitter  eny ifotony ao Haiti. Manana lisitra misaraka  ahitana ireo fikambanana mpamonjy voina sy mpanao gazety eny ifotony ihany koa aho. Ary araho hatrany ny pejy fitantarana manokana momba an'i Haiti .ato amin'ny GV
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/24/116556/
 nanamarika : http://twitter.com/bhatiap/status/7725336566
 mavitrika mitady dokotera: http://twitter.com/PIH_org/status/7728327110
 hoy izy: http://twitter.com/RAMhaiti/status/7726307621
 lisitr'ireo mpisera Twitter: http://twitter.com/georgiap/live-from-haiti
 lisitra misaraka: http://twitter.com/jilliancyork/haiti
 pejy fitantarana manokana momba an'i Haiti: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/haiti-earthquake-2010/